Tetika 7 hampitomboana ny varotra fivarotana fialantsasatra | Martech Zone
Talata, Novambra 18, 2014 Douglas Karr
Nanolotra fampahalalana iray taonina izahay androany androany Sales Sales sy ireo daty, faminaniana ary antontan'isa mifandraika amin'izany, izao izahay dia te hizara infographic momba ny fomba ahafahanao manararaotra ireo fironana ireo hampitomboana anao ny fivadihan-tserasera mandritra ny fetin'ny fialantsasatra.
Fotoana indray izao ny taona! Hanomboka ny fientanentanana miantsena amin'ny fialantsasatra. ShortStack nanangona antontan'isa maromaro (25!) momba ny fironana amin'ny fiantsenana, miampy hevitra vitsivitsy ho an'ny Fanentanana izay hanampy anao hifandray amin'ireo mpankafy sy mpanaraka anao bebe kokoa mandritra ny herinandro vitsivitsy.
Mbola betsaka ny fotoana ahazoana fanomezana eo am-baravarana ka izao no fotoana hanolorana fampielezan-kevitra maimaim-poana ny fandefasana!
Te hitahiry ny vidin'ny fandefasana? Ahoana ny fanolorana fihenam-bidy ho an'ny mpanjifa maniry mitsena ny fividianan'izy ireo ao amin'ny fivarotanao?
Manolora fanentanana amin'ny alàlan'ny media sosialy izay manintona ny vondrom-piarahamoninao misoratra anarana amin'ny alàlan'ny mailaka hahafahanao manosika tolotra mandritra ny vanim-potoana.
Ankehitriny rehefa manana ireo mailaka ireo ianao, dia mandahiza an manolotra andro iray mandritra ny fialantsasatra.
Manararaotra Showroomers ary manomeza tolotra finday ihany hitehirizana ny fividianana ao anaty magazinao!
Raha miresaka finday dia aza hadino ny mametraka azy tapakila vonona amin'ny finday. Ny klioba fandefasana hafatra dia mbola fomba tsara hanosehana ny fihenam-bidy ho an'ny mpanjifanao, hanombohana iray ary hanolorana tapakila vitsivitsy mandritra ny fialantsasatra.
Araraoty ny vanim-potoana fiantsenana ary manomboha maharitra sweepstakes ho an'ireo mpamandraka mailakao ka dia mijanona ho voasoratra ara-batana sy mavitrika amin'ny mailaka fanolorana andefasanao azy ireo.
Tags: fihenam-bidymaimaim-poana ny fandefasanavarotra fialantsasatrafivarotana fialantsasatramanatsara ny varotrahampitombo ny varotratapakila findayfanolorana findaymanolotra andro irayonline shoppingmaka fihenam-bidyfampirantianasweepstakes
Daty manan-danja sy antontan'isa tokony ho fantatrao mankany amin'ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra 2014